Maalinta Koowaad: Heshiisyada ugu fiican ee alaabada Apple | Wararka IPhone
Maalinta Koowaad: Qiimaha ugu Fiican ee Alaabada Apple
Ignacio Sala | | Qalabka IPhone, iPad
Mid ka mid ah maalmaha ugu badan ee la wada sugayo dhammaan isticmaaleyaasha Amazon Prime, waa Maalinta Koowaad, waa maalin sannadihii la soo dhaafay noqday laba (sida ay tahay dhacdadii Jimcadii Madoobaa ee dhacday inay usbuuc ku dhammaato hal maalin oo keliya).
Maanta oo dhan iyo berriba waxaan gacanta ku haynaa tiro badan oo ka mid ah wax soo saarka Apple oo leh qiimo dhimis xiiso leh, qiimo dhimis aan seegi karin haddii aan maalintan sugaynay. Hadaad rabto inaad ogaato heshiisyada ugu fiican ee ku saabsan alaabada Apple maalinta koowaad, Waxaan kugu martiqaadayaa inaad akhriska sii wadato.
1.1 iPhone SE (2020) laga bilaabo 475 euro
1.2 iPhone 12 mini oo ka socota 664 euro
1.3 iPhone 12 laga bilaabo 756 euro
1.4 iPhone 12 Pro laga bilaabo 1.099 euro
2.1 iPad mini 2019 laga bilaabo 404 euro
2.2 iPad Pro 2021 laga bilaabo 829 euro
2.3 Qarniga 1aad iyo 2aad qalinka Apple
2.4 Kiiboodhka Sixirka 2020 laga bilaabo 279 euro
2.5 Logitech Combo Touch oo ah 94 euro
3.1 Tixda 3 laga bilaabo euro 169
3.2 Tixda 6 laga bilaabo euro 369
4.1 AirPods Pro ilaa 188 euro
4.2 AirPods loogu talagalay 129 euro
iPhone SE (2020) laga bilaabo 475 euro
IPhone-ka ugu raqiisan ee Apple ay si rasmi ah u iibiso waa iPhone SE, oo ah nooca leh a Muuqaal 4,7-inch ah oo muujinaya naqshad la mid ah iPhone 8.
Tusaalaha ah 256 GB ayaa lagu heli karaa 549 euro, nooca 128GB waa 10 euro ka jaban nooca 256 GB halka qaabka gelitaanka, nooca 64GB waxay si dhib leh noo siisaa xiiso leh qiimo dhimis marka la barbar dhigo qiimaha rasmiga ah ee Dukaanka Apple: 475 euros.
iPhone 12 mini oo ka socota 664 euro
Imaatinka IPhone 12, Apple waxay soo saartay nooca mini, oo ah shaashad leh shaashad 5,4-inji ah oo aan helin guushii ay Apple ka filaysay suuqa (xagga iibka), laakiin taasi wuxuu leeyahay niche. Qaabkani wuxuu na siinayaa awood la mid ah kuwa kale ee ka mid ah noocyada kala duwan ee iPhone 12.
IPhone 12 mini in uu version of 64 GB ayaa lagu heli karaa 664 euro, halka nooca 128 GB waxay gaareysaa 749 euro. Waxaan sidoo kale ka heli karnaa bixinta Qaabka 256 GB ee 849 euro.
iPhone 12 laga bilaabo 756 euro
Haddii iPhone 12 mini uu adiga kugu yar yahay wax walba, inta lagu jiro Maalinta Koowaad, Amazon ayaa na siisa iPhone 12 64 GB oo ah 756 euro. Nooca ah 128 GB waxay gaareysaa 798 euro iyo 256 GB nooca 908 euro.
iPhone 12 Pro laga bilaabo 1.099 euro
Haddii aad rabto inaad ku raaxaysato dhammaan howlaha ay IPhone ugu awoodda badan suuqa, ikhtiyaarka ugu fiican waa iPhone 12 Pro, oo ah nooc ku jira Nooca 128 GB ayaa loo heli karaa 1.099 euro.
Hadduu 128 GB gaabiyo, nooca 256 GB ayaa lagu heli karaa 1.239 euro iyo 512 GB nooca wuxuu gaarayaa 1.509 euro.
iPad mini 2019 laga bilaabo 404 euro
Haddii aad raadineyso Ipad kooban, waa inaad fiirisaa iPad mini. Moodelkan oo laga bilaabay suuqa 2019, ayaa ah la jaan qaadi kara jiilka koowaad qalinka Apple, waxaa maamula processor-ka A12 Bionic wuxuuna ku daraa shaashad 7,9-inji ah. inta udhaxeysa maanta iyo berri, waxaan qaban karnaa vQaabka 256 GB kaliya 490 euro.
Haddii qaabka 256GB way kugu weyntahay, ikhtiyaar kale oo la tixgeliyo ayaa ah 64 GB nooca 404 euro.
iPad Pro 2021 laga bilaabo 829 euro
El iPad Pro 2021 oo leh processor M1 waxay si toos ah ula tartameysaa Mac-yada isla shirkada wax walbana waxay umuuqdaan inay muujinayaan isku soo dhawaansho mustaqbalka oo Apple ka diida inay xaqiijiso. Qaabka 11-inji ah, ee ku jira Nooca 128 GB ayaa loo heli karaa 829 euro. Noocan oo kale ah oo leh isku xirka macluumaadka mobilada ayaa hoos ugu dhacaya 979 euro.
Nooca 256GB ee keydinta iyo isku xirka Wi-Fi waxaa lagu heli karaa 932 euro. Inta kale moodooyinka qiimo dhimis ma lahan, si la mid ah qaabka 12,9-inji ah laga bilaabo 2021.
Qarniga 1aad iyo 2aad qalinka Apple
Haddii aad rabto inaad ka faa iideysato Apple Pencil-kaaga la jaanqaadi kara iPad ama iPad Pro, waa inaad tixgelisaa inaad iibsato qalin Apple. Qalabkan waxaa lagu heli karaa laba nooc: jiilalka 1aad iyo 2aad, moodeelladaas Waxay la jaan qaadayaan qalab iPad kala duwan.
El Qarniga 1aad qalinka Apple, wuxuu leeyahay qiimo caadi ah 99 euro, hase yeeshe, inta u dhexeysa maanta iyo berri, waxaa lagu heli karaa oo keliya 67,25 euro. Qaabka 2-aad, la jaan qaada 11-inch iPad Pro jiilka 2-aad iyo 12,9-inch iPad Pro jiilka 3-aad wixi ka dambeeya, waxaa lagu heli karaa 111,50 euro, marka qiimaheeda caadiga ahi yahay 135 yuuro.
Qalinka Apple ee jaban waxaa loo yaqaan Crayon waxaana sameeya Logitech. Qalabkani wuxuu la jaan qaadayaa dhammaan iPad 2019 iyo moodooyinka dambe (maahan iPad Pro) iyo waxaa lagu heli karaa 50 euro.
Kiiboodhka Sixirka 2020 laga bilaabo 279 euro
Markii la bilaabay iPad Pro 2021, Apple waxay cusbooneysiisay Keyboard-ka sixirka si loogu waafajiyo dhumucda cusub ee moodeelkan, oo lagu kordhiyay 5 mm, in kasta oo farqiga u dhexeeyaa ficil ahaan aan la dareemi karin. Keyboard-ka sixirka ee ay Apple soo saartay 2020-kii waayo, 12,9-inch iPad Pro waxaa laga heli karaa Amazon kaliya 273 euro.
Cusub Kiiboodhka Sixirka ee iPad Pro 5th Generation (2021) 12,9-inji waa la heli karaa qiimo la mid ah kan Apple Store: 399 euro (In kasta oo aan la heli karin illaa 13-ka Juulaay). Moodelkani wuxuu ku habboon yahay kumbuyuutarka iyo iPad Pro si dhammaystiran, oo aan ahayn qaabka 2020, in kasta oo ay tahay inaad si dhow u eegto si aad u ogaatid.
El Keyboard sixir ah oo loogu talagalay 2021-inch iPad Pro 11, ma lahan wax qiimo dhimis ah, maxaa yeelay dhumucda qaabkani weli wuxuu la mid yahay noocii sanadkii hore, maxaa yeelay shaashadda la mid ma ahan tan laga helay nooca 12,9-inch (miniLED) laga soo bilaabo 2021.
Logitech Combo Touch oo ah 94 euro
Si kastaba ha noqotee, kumbuyuutarrada iPad-ka ee jaban ee ku yaal Amazon ayaa si xawli ah ku socda 99% ka mid ahi gabi ahaanba waa wax aan faa iido lahayn haddii ujeedadu tahay inaad saacado badan ku qorto qalabkan.
Ikhtiyaar aad u xiiso badan oo lagu xisaabtamo, waxaan ka helnaa Logitech Como Taabasho, kiiboodh kaas oo sidoo kale lagu daro Trackpad, QWERTY qaabka, oo la jaan qaadaya Jiilka 7aad ee iPad iyo waa maxay diyaar ah 94,39 euro.
Moodelkan sidoo kale waa loo heli karaa iPad Pro 2021 oo ah 229 euroahaansho beddelka ugu fiican ee Keyboard Magic, xitaa haddii uusan iib ahayn maalmahan.
Tixda 3 laga bilaabo euro 169
Kaliya 169 euro, waxaan ka helnaa Apple Watch Taxanaha 3, aalad u muuqatay in looga tagayo watchOS 8, laakiin aakhirka sidaas ma noqon doonto, markaa haddii aadan rabin inaad lacag badan ku bixiso Apple Watch-kaaga ugu horreeya, waad sameyn kartaa leh tan Qaabka 38 mm ee kaliya 169 euro.
Haddii nooca 38mm uu adiga kugu yar yahay, the Qaabka 42mm (kan ugu weyn ee Apple ay na siiso qaabkan) 199 euro.
Tixda 6 laga bilaabo euro 369
Loogu talagalay uun 389 euros, waxaad dooran kartaa qaabka Apple Watch Taxanaha 6 oo leh GPS iyo 44mm, moodal leh kiiska aluminium iyo suunka silikoonka. Qaabka 40mm ayaa sidoo kale lagu heli karaa iibka kaliya 369 euros.
Sidoo kale dalab waa moodel la xidhiidha xogta. The 6mm Taxanaha 40 oo leh xog moobil waxaa lagu heli karaa 418 euro halka Nooca 44 mm wuxuu marayaa ilaa 459 euro.
Taxanaha Apple Watch 6 wuxuu ku darayaa a mitirka oksijiinta dhiigga iyo waliba intaa dheer, waxay noo ogolaaneysaa inaan xakameyno garaaca wadnaheena anagoo adeegsaneyna howsha electrocardiogram ee qaabkani kudarsamayo Qeybta 4aad.
AirPods Pro ilaa 188 euro
Haddii aad sugeysid maalintan si aad uga faa'iideysato bixinta AirPods, maalintaadu way timid. Mid ka mid ah dalabyada ugu wanaagsan ee aan ka heli karno Amazon, waxaan ka helnaa AirPods Pro, samaacadaha taleefannada gacanta ee Apple oo leh buuq la joojiyo oo loo heli karo 188 euros, ku dhowaad 100 euro oo ka jaban kan Apple Store.
AirPods loogu talagalay 129 euro
Jiilka labaad ee AirPods, sidoo kale waxaa laga heli karaa a qiimo aad u xiiso badan. Waxaan ka heli karnaa qaabkaas waxaa lagugu soo dalacayaa fiilo ahaan 129 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Maalinta Koowaad: Qiimaha ugu Fiican ee Alaabada Apple
Meelaha, Maqalka Khasaaraha ah wuxuu ku yimaadaa Apple Music Beta ee loogu talagalay Android
Anker ugu fiican ayaa bixiya Maalinta Amazon Prime Day